မကျေမနပ် ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေအားလုံး သိဖို့ သူ့သဘော ထား ကို ပြတ်သားစွာပြောလိုက်တဲ့ ခန့်စည်သူ(အပြည့်စုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ) – Shan Ma Lay
မကျေမနပ် ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေအားလုံး သိဖို့ သူ့သဘော ထား ကို ပြတ်သားစွာပြောလိုက်တဲ့ ခန့်စည်သူ(အပြည့်စုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ)
June 7, 2021 aung aungLeaveaComment on မကျေမနပ် ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေအားလုံး သိဖို့ သူ့သဘော ထား ကို ပြတ်သားစွာပြောလိုက်တဲ့ ခန့်စည်သူ(အပြည့်စုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ)
မဂ်လာပါ ပရိတ်သတ် ကြီးရေဥက္ကဌကြီး ခန့်စည်သူက အားလုံးသိအောင် ပြောပြီ
ရန်ကုန် ဇွန် (၆) ရက် နို င်ငံတော် စီမံ အုပ်ချုပ်ရေးကောင် စီ လက် ထက် ပထမ ဆုံး အကြိမ် ရုပ်ရုင် အစည်း အရုံး ဥက္က ဌ အဖြစ် တာဝန် ပေးခြင်းခံ လိုက် ရ သည့်ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ခန့်စည်သူနှင့် ပတ်သက်၍ အနုပညာ အတိုင်း အဝန်း အချို့နဲ့ ၎င်းအား အားပေးနေသည့်ပ ရိတ် သ တ်အချို့တို့အကြားလူမှုကွန်ရက်စာမျာနာများပေါ်တွင် ဝေဖန်မှုများ မြင့်တက်လျက်ရှိသည် ကို တွေ့နေရပါသည်။
ထို့ကြောင့် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဌသစ် ကိုခန့်စည်သူ၏သဘောထားမှတ်ချက်များအား ကောက်နုတ်တင်ပြ လိုက် ရပါသည်ခု ချိန်မှာ ကျွန် တော့် ကို ဝေဖန် နေကြ မယ်ဆို တာ ကျွန်တော် ကြိုတွက်ပြီးထားပါကျွန်တော်တို့ လောကအတိုင်းအဝန်းတွေ ကရော ကျွန်တော့် ကို ချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကရောပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်ပြောမယ်တာဝန်ဆိုတာ ယူချင်မှလည်း ရချင်မှရတာ ရချင်သော်လည်း ပေးချင်မှ ပေး တာ မျိုးလေဗျာဆိုတော့ဘယ်လိုပဲ ပြောကြပါစေဗျ
ကျွန်တော် ကျွမ်းတဲ့အနုပညာ ကျွန်တော်ကျင်လည်နေတဲ့လောကထဲကထဲမှာ ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ပြချင်တယ် ကျွန်တော်လည်း ဗျာ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ပဲ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် မကျွမ်းကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးလောကထဲ ဝင်ဖို့ဆိုတာ သိပ်ကိုခက်ခဲလွန်းပါတယ်နိုင်ငံရေးသမားက နိုင်ငံရေးလောကထဲကိုသူငယ်စဉ်ကတည်းက အသက်မွေးဝမ်းပြုခဲ့တလို ကျွန်တော်တို့ အနုပညာရှင်တွေကလည်း ငယ်စဉ်ကတည်းက
အနုပညာပိုးတွေပါလာလို့ အထိုက်အလျောက်အောင်မြင်နေကြတာပဲလေဗျာ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်အနုပညာလုပ်ငန်းကို ဆက်လုပ်သွားမယ် အနုပညာရှင် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ မွေး ထုတ်သွားမယ်CDMနဲ့ ပတ်သက်လို့လုပ်တာနဲ့မလုပ်တာ ဘာကွာသွား လဲဆိုတော့အိပ်ရတာနဲ့ အိပ်ယာပုံစံအိပ်ပျော်တာနဲ့အိပ် မပျော်တာကွာသွားတာပေါ့ဗျာ(ရယ်လျက်)
တစ်ခုရှိတယ်ဗျ အနုပညာရှင်သမားတွေရဲ့အားနည်းချက်ကငွေရမဲ့လမ်းကြောင်းဆို အရမ်းလိုက်တယ်တစ်ရက် နှစ်ရက်လောက်လမ်းပေါ် ထွက် ဒါလေးလုပ်ပေးပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ကောင်းပေါင်းဘယ် လောက်ရိုက်မှ ရတယ်ဆိုတဲ့ ငွေအမောက် ကို သူတို့ ကော င်းကောင်းသိတလိုအခြားတစ်ဘက်မှာရှိတဲ့ အနုပညာ ရှင် အချင်းချင်း လည်း သိ တယ် ခု နိုင်ငံတော်လူကြီးတွေ ပိုသိမှာပေါ့ကိုခန့်စည် သူရဲ့ Video မှတ်တမ်းလေး. ဆင်ဆာ မပေးပါ သဖြင့် နားလည် ပေးစေ ချင် ပါ တယ်
ပြောသွားတာလေး သဘောကျလို့ ကောက်နုတ် တင်ပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်Crd အခုလိုဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့ပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ် ယောက်ခြင်းစီတိုင်းကျန်းမာပျော်ရွှင်သောနေ့ရက်များပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ c r d
ထို့ကြောင့် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဌသစ် ကိုခန့်စည်သူ၏သဘောထားမှတ်ချက်များအား ကောက်နုတ်တင်ပြ လိုက် ရပါသည်ခု ချိန်မှာ ကျွန် တော့် ကို ဝေဖန် နေကြ မယ်ဆို တာ ကျွန်တော် ကြိုတွက်ပြီးထားပါကျွန်တော်တို့ လောကအတို င်း အဝန်းတွေ ကရော ကျွန်တော့် ကို ချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကရောပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်ပြောမယ်တာဝန်ဆိုတာ ယူချင်မှ လည်း ရချင်မှရတာ ရချင်သော်လည်း ပေးချင်မှ ပေး တာ မျိုးလေဗျာဆိုတော့ဘယ်လိုပဲ ပြောကြပါစေဗျာ
ကျွန်တော် ကျွမ်းတဲ့အနုပညာ ကျွန်တော်ကျင်လည်နေတဲ့လောကထဲကထဲမှာ ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ပြချ င်တယ် ကျွန်တော်လည်း ဗျာ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ပဲ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် မကျွမ်းကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးလောကထဲ ဝင်ဖို့ဆို တာ သိပ်ကိုခက်ခဲလွန်းပါတယ်နိုင်ငံရေးသမားက နိုင်ငံရေးလောကထဲကိုသူငယ်စဉ်ကတည်းက အသက်မွေးဝမ်းပြုခဲ့တ လို ကျွန်တော်တို့ အနုပညာရှင်တွေကလည်း ငယ်စဉ်ကတည်းက
အနုပညာပိုးတွေပါလာလို့ အထိုက်အလျောက်အောင်မြင်နေကြတာပဲလေဗျာ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်အနုပညာ လု ပ်င န်းကို ဆက်လုပ်သွားမယ် အနုပညာရှင် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ မွေး ထုတ်သွားမယ်CDMနဲ့ ပတ်သက်လို့လုပ်တာနဲ့မလု ပ်တာ ဘာ ကွာသွား လဲဆိုတော့အိပ်ရတာနဲ့ အိပ်ယာပုံစံအိပ်ပျော်တာနဲ့အိပ် မပျော်တာကွာသွားတာပေါ့ဗျာ(ရယ်လျက်)
တစ်ခုရှိတယ်ဗျ အနုပညာရှင်သမားတွေရဲ့အားနည်းချက်ကငွေရမဲ့လမ်းကြောင်းဆို အရမ်းလိုက်တယ်တစ်ရက် နှစ်ရက်လော က်လမ်းပေါ် ထွက် ဒါလေးလုပ်ပေးပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ကောင်းပေါင်းဘယ် လောက်ရိုက်မှ ရတယ်ဆိုတဲ့ ငွေအမောက် ကို သူတို့ ကော င်းကောင်းသိတလိုအခြားတစ်ဘက်မှာရှိတဲ့ အနုပညာ ရှင် အချင်းချင်း လ ည်း သိ တယ် ခု နိုင်ငံတော်လူကြီးတွေ ပိုသိမှာပေါ့ကိုခန့်စည် သူရဲ့ Video မှတ်တမ်းလေး. ဆင်ဆာ မပေးပါ သဖြင့် နားလည် ပေးစေ ချင် ပါ တယ်
ပြောသွားတာလေး သဘောကျလို့ ကောက်နုတ် တင်ပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်Crd အခုလိုဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့ေ ပြး က တဲ့ ပရိတ်သတ်တစ် ယောက်ခြင်းစီတိုင်းကျန်းမာပျော်ရွှင်သောနေ့ရက်များပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတော င်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဇာတ်ကား(၂၀)မပြည့်သူတွေ ရုပ်ရုင်အစည်းအရုံးကဒ် ရပြီး နှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတာကို အံ့သြတယ်လို့ ရွှေရူပါဦး ပြော….(အပြည့်စုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ)
“နေပူပူမှာ စက်ဘီးလေးနဲ့ ချွေးဒီးဒီးကျအောင် ပစ္စည်းလိုက်ပို့နေတဲ့ လူငယ်လေးရဲ့ ပုံကိုမြင်ပြီး ဆိုင်ကယ်တစ်စီး လက်ဆောင်ပေးခဲ့သူ”(အပြည့်စုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ)
June 11, 2021 aung aung
ကိုဗစ်လျှော်ကြေး အတွက် အမေရိကန်က တရုတ်ကို ဒေါ်လာ (၁၀) ထရီလီယံ တောင်း
စစ်ဆေးရုံမှာလက်ရှိတက်ရောက်ကုသမှုခံယူနေတဲ့ MMA ဖိုက်တာ ဖိုးသော်ရဲ့ အခြေအနေ မြင်ကွင်း